ကျမ ဘယ်တော့မှ ကုလားလို့ မခေါ်ဘူး။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on January 24, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ, အထွေထွေ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရခိုင်ပြည်က ပြဿနာ ဝိုင်းငြိမ်းကြရာမှာ နိုင်ငံသားတိုင်း တာဝန်ပါ
ကြက်ဥမှာ အဆိပ်တွေ့ရ →